Ọnwụ na -amalite n'ọnwa Ọgọst: Seychelles na -edekọ ọnụọgụ mbata ndị ọbịa dị mma
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Ọnwụ na -amalite n'ọnwa Ọgọst: Seychelles na -edekọ ọnụọgụ mbata ndị ọbịa dị mma
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • Akụkọ na -agbasa Russia • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Nọmba ndị ọbịa nke Seychelles
Na -akara akara ọzọ dị mkpa maka afọ ahụ, yana mmalite ụgbọ elu ruo Ọgọstụ, ebe agwaetiti ahụ kụrụ mmanya nke ndị ọbịa 80,000, nke bụ akara ọzọ dị mma maka mgbake maka ụlọ ọrụ njem na Seychelles.
Ka njem malitegharia na Europe, ndị na -ahụ maka mpaghara na mpaghara agwaetiti Indian Ocean nwere nchekwube ịhụ mmụba nke ndị ọbịa sitere n'ahịa isi mmalite ha na Western Europe.
N'ime izu 37 nke 2021, edepụtara ndekọ 9,000 ndị ọbịa ebe ha na -aga.
Ndị isi ahịa isii kacha elu maka Seychelles maka afọ dịka Ọgọst 6, 15, bụ Russia, UAE, Israel, Germany, France, na Saudi Arabia.
N'ịgụ ọnụọgụ dị ịtụnanya nke ndị ọbịa 10,413 n'ime izu abụọ, Seychelles natara onye ọbịa ya 2th maka afọ na Ọgọst 76,737, 8, yana onye ọbịa ya 2021 na Ọgọst 82,026, yana 15,2021% nke ndị bịarutere, edekọtara mgbe usoro ikpeazụ nke Ọ ga -amalitegharị njem nlegharị anya na Machị 96.
N'ime izu 37 nke 2021, edepụtara ndekọ 9,000 ndị ọbịa na ebe a na-aga, naanị otu puku na-erughị nkezi ọrịa na-efe efe nke afọ 2019.
Ndị ọbịa 5,289 kwụsịrị na Seychelles n'ime izu nke abụọ nke Ọgọst 2021 nwere mmụba pụtara ìhè site na France, ebe ndị ọbịa 807 na -akwalite ndị mbata n'izu Ọgọstụ 9 ruo 15, 2021.
Ka njem na -amalite na Europe na mba na -eme ka mmachibido njem ha kwụsị, ndị nwere mpaghara na mpaghara agwaetiti Indian Ocean nwere nchekwube ịhụ mmụba nke ndị ọbịa sitere n'ahịa isi mmalite ha na Western Europe.
Oriakụ Sherin Francis, onye odeakwụkwọ ukwu maka njem nlegharị anya, kwuru na ọnụọgụ nke ugbu a na -agba ume nke ukwuu, ebe ha na -egosipụta amụma nke Njem nlegharị anya Seychelles na mbido afọ ịnata n'etiti ndị ọbịa 111,000 na 189,000 na 2021.
“Ọchịchọ maka njem ka dị elu n'agbanyeghị na ndị njem ka na -eche ọtụtụ ihe edoghị anya. Ọgọstụ amalitela na ndetu dị mma maka ebe anyị na -aga, anyị erutela ihe dị ka ndị ọbịa 700 kwa ụbọchị ọnụ ọgụgụ ahụ na -adịgidekwa. Ndị njem nlegharị anya Seychelles na -atụ anya ọnụọgụ dị mma maka ọnwa ndị na -abịa. Anyị nọ n'ụzọ iji mezuo ebumnuche mbata ndị njem anyị na 2021. Ekwenyesiri m ike na site na mbọ otu ndị ahịa anyị na ndị mmekọ anyị na -eme njem, ọkara nke abụọ nke afọ ga -abụrịrị ohere ka mma maka Seychelles iji meziwanye ọnụ ọgụgụ mbata ndị ọbịa ya na nrite ndị njem, ”ka Oriakụ Francis kwuru.
Ahịa isii kacha ewu ewu maka Seychelles maka afọ dịka 15 Ọgọst 2021 bụ Russia nwere ndị ọbịa 17,228 ndị United Arab Emirates (UAE) na Israel sochiri ndị ọbịa 14,178 na 7,086 n'otu n'otu, Germany nwere ndị ọbịa 5,122, France nwere ndị ọbịa 4,276 na n'ikpeazụ Saudi Arebia nwere ndị ọbịa 3,166.
Ndị ọrụ ụgbọ elu itoolu na -eji ụgbọ elu oge niile gụnyere njem ụgbọ elu gụnyere Emirates Airlines, Qatar Airways, Aeroflot, Etihad Airways, Edelweiss, Ethiopian Airlines, Turkish Airline, Kenya Airways yana ụgbọ elu mba ya bụ Air Seychelles.
Ebe ntụrụndụ Sandals® na -eme ememme afọ 40 site na ịlaghachi azụ ...
Nyocha ọhụrụ siri ike maka ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Prague ...
Ebe ezumike akpụkpọ ụkwụ na -eji ọmarịcha ihe ...
Airbus na -ebuga ụgbọelu ọhụrụ A220 ọhụrụ na Air France